Asa 26 - Ny Baiboly
Asa toko 26
Paoly teo anatrehan'i Agripà sy Festosa - Ny nilazany ny nibebahany - Ny nieken'izy ireo ny tsy ananan'i Paoly tsiny.
1Dia hoy Agripà tamin'i Paoly: Mahazo mandahatra hiaro ny tenanao hianao. Tamin'izay, naninjitra ny tànany i Paoly, ka nandaha-teny hanala tsiny ny tenany, araka izao: 2Hasambarana ho ahy, ry Agripà mpanjaka, ny ahazoako miaro tena eto anatrehanao anio, amin'ny zavatra rehetra iampangan'ny Jody ahy; 3satria tsy misy olona mahalala toa anao ny amin'ny fanao aman'ady hevitry ny Jody. Koa mihanta aminao aho mba hihaino ahy kely amim-paharetana.
4Fantatry ny Jody rehetra hatramin'ny andron'ny fahatanorako ny fitondran-tenako; fa tao Jerosalema foiben'ny fireneko aho no nitoetra, 5ka noho ny fahalalany ahy ela toy izany, dia hainy ambara koa, raha te-hilaza ny marina izy, fa Farisiana aho fahizany, nanaraka ilay antokom-pivavahana fatra-panoa lalàna indrindra amin'ny fivavahanay. 6Nefa ny fanantenana ny zavatra nampanantenain'Andriamanitra ny razanay indrindra no itsaràna ahy ankehitriny, 7dia ny fanantenana andrandrain'ny fokonay roa amin'ny folo manompo an'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fanantenana izany no itsarana ahy, ry mpanjaka. 8Ka moa ve heverinareo ho zavatra tsy azo inoana fa mahatsangana ny maty Andriamanitra?
9Ary na izaho koa aza, dia efa nihevitra fa tsy maintsy manao izay tratry ny aiko aho hanohitra ny anaran'i Jesoa avy any Nazareta, 10ka dia nataoko toy izany tany Jerosalema; fa maro ny olona masina nahiboko tao an-tranomaizina nony efa nahazo fahefana tamin'ny lehiben'ny mpisorona aho; ary anisan'ny nandatsa-bato nanaiky koa aho, raha nisy hovonoina izy ireny. 11Matetika no nitety ny sinagoga nampijaly azy ireny aho, sy nanery azy hiteny ratsy an'i Jesoa, ary efa lasa nanenjika azy hatrany an-tanàna hafa aza, noho ny hatezerako mafy loatra taminy.
12Tamin'izany, raha ndeha ho any Damasa aho, nitondra ny fahefana sy ny teny azoko tamin'ny lehiben'ny mpisorona, 13ilay sahabo ho nitatao vovonana tsara iny ny andro, dia endrey, ry mpanjaka! fa teny an-dàlana dia nahita fahazavana avy any an-danitra aho, izay namirapiratra noho ny masoandro, sy nanjelanjelatra nanodidina ahy mbamin'izay nomba ahy. 14Lavo tamin'ny tany terý izahay; ary nandre feo aho, nilaza tamiko tamin'ny teny hebrio hoe: Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy hianao? Mafy ho anao anie ny mitroatra manohitra ny fanindronana e! 15Iza moa hianao, Tompoko? hoy aho. Dia hoy ny Tompo: Izaho no Jesoa izay enjehinao. 16Mitsangàna ka mijoroa amin'ny tongotrao. Fa izaho no niseho taminao, dia ny mba hanendry anao ho mpanao raharaha sy vavolomelon'ny zavatra efa hitanao sy izay mbola hisehoako aminao koa. 17Navahako tamin'ny vahoaka Jody hianao, sy amin'ny jentily izay hanirahako anao izao, 18mba hampahiratra ny mason'izy ireo, hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, sy avy amin'ny fahefan'i Satana ho amin'Andriamanitra, ka hahazoany famelan-keloka sy lova miaraka amin'ny olo-masina noho ny finoana ahy.
19Koa amin'izany, ry Agripà mpanjaka, tsy nanohitra ny fahitana avy any an-danitra aho, 20fa nitory ny fibebahana sy ny fiverenana amin'Andriamanitra tany Damasa aloha, vao tany Jerosalema, sy eran'i Jodea manontolo, ary tamin'ny jentily koa, mba hanaovany asa mendrika ny fibebahana. 21Izany no nisamboran'ny Jody ahy tao an-tempoly, sy nitadiavany hamono ahy. 22Noho ny fitahian'Andriamanitra àry no mbola velona aho mandraka ankehitriny mitory amin'ny kely sy ny lehibe, ary tsy manambara afa-tsy ny zavatra voalazan'i Moizy sy ny mpaminany rahateo hahatanterahany, 23dia ny hoe: tsy maintsy hijaly ny Kristy, nefa hitsangana voalohany amin'ny maty izy, ka hitory fahazavana amin'ny vahoaka Jody sy amin'ny jentily...
24Mbola niteny izany hanala tsiny ny tenany eo Paoly no niantso tamin'ny feo mahery Festosa nanao hoe: Very saina hianao, ry Paoly; ny fianaranao be loatra no nampivaona ny hevitrao. 25Fa hoy Paoly: Tsy very saina aho, ry Festosa tsara indrindra, fa tenin'ny fahamarinana sy fahendrena no alahatro. 26Fantatry ny mpanjaka izany, ka lazaiko aminy amim-pahasahiana, satria ataoko fa tsy misy miafina aminy izany na dia kely aza, sady tsy nisy natao an-takona koa izany. 27Mino ny mpaminany va hianao, ry Agripà? Eny, fantatro fa mino hianao. 28Dia hoy Agripà tamin'i Paoly: Kely sisa no tsy ahatongavanao ahy ho kristianina. 29Na kely sisa na be, hoy Paoly, dia mangataka amin'Andriamanitra aho, mba ho tonga toa ahy avokoa hianao sy izay rehetra mihaino ahy eto ankehitriny, afa-tsy amin'ireto fatorana ireto.
30Dia nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenisy, mbamin'izay rehetra nanaraka azy ireo. 31Nony tafavoaka izy ireo dia nifampilaza hoe: Tsy nanao na inona na inona tokony hahafaty azy na hamatorana azy io lehilahy io. 32Ary hoy Agripà tamin'i Festosa: Azo nalefa io lehilahy io raha tsy nangataka hotsarain'i Sezara. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0334 seconds